Ny Baiboly, fanambaran’Andriamanitra ny tenany (2)
"Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny Soratra Masina, dia nalevina, ary natsangana tamin’ny andro fahatelo. " 1 Korintiana 15:3, 4
"Tsy ho menatra izay rehetra mino Azy." Romana 10:11
Ny Baiboly dia mirakitra hafatra velona. Raha mino ny Tenin’Andriamanitra ianao, dia hahita fa mamokatra ao anatinao izay lazainy io Teny io. Manome hevitra sy torolalana vaovao mantsy izy, manome fiadanam-po lalina sy fahazoana antoka ny fananana fiainana mandrakizay. Izany hafatra izany dia ny Vaovao mahafaly, izany hoe ny Filazantsara. Ambarany fa Jesosy dia “maty noho ny fahotantsika”. Eny, maty ho ahy sy ho anao Ilay Zanak’Andriamanitra. Fa indrindra, aoka ianao tsy hihevitra hoe tsy nanao fahotana teo anatrehan’Andriamanitra, na nahavita asa soa ampy hanonerana azy ireny. Izany dia ho fiheverana fa mandainga Andriamanitra, satria milaza Izy ao amin’ny Teniny hoe samy efa nanota ny olona rehetra, ka tsy manana ny voninahitra avy aminy. Hanana anjara amin’io voninahitra io aho, raha manaiky fa izay rehetra mino an’i Kristy dia hamarinina eo anatrehan’Andriamanitra, hamarinina maimaimpoana. Koa dia natao ho ahy ilay fahasoavana lavorary avy amin’Andriamanitra.
Afaka manolotra izany fanomezana tsara indrindra izany Andriamanitra, satria Jesosy Zanany efa nisolo ahy, niaritra ny famaizana sahaza ireo fahotako. Nitia ahy Izy, nanefa, nanolotra ny ainy, latsaka teo amin’ny hazofijaliana ny rany. Andriamanitra dia mamela heloka izay mino, manamarina azy, mamindra fo, ary manome fiainana mandrakizay. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika (Romana 3 ; Jaona 3 ; 1 Jaona 1).
Tia anao Andriamanitra ary miantso anao. Manatòna ankehitriny, avia mba hahita ny fampisehoana lehibe indrindra ny fitiavany sy ny heriny, dia izao : maty Jesosy kanefa tsy nijanona tao am-pasana ; natsangan’Andriamanitra tamin’ny maty Izy, ary velona mandrakizay.